हिजो प्रहरीलाई नै आ’क्रमण गर्ने यी चिनियाँ नागरिकले नेपालमा गर्थे यस्तो काम ! – Nepal Insider
मुख्य पृष्ठ /समाचार/हिजो प्रहरीलाई नै आ’क्रमण गर्ने यी चिनियाँ नागरिकले नेपालमा गर्थे यस्तो काम !
काठमाडौं : देशको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारको मूलगेटमा लकडाउनको समयमा स्वदेश फर्कन पाऊँ भन्दै प्रर्दशन गर्ने क्रममा नेपालस्थित भिभो मोबाइलका ‘कन्ट्री म्यानेजर’ पक्राउ परेका छन्। चिनियाँ कम्पनी भिभो मोबाइलका ‘कन्ट्री म्यानेजर’ गेभिनसहित चार चिनियाँ नागरिक लकडाउनको समयमा प्रर्दशन गर्ने कम्रमा पक्राउ परेका हुन्। उनले सिंहदरबार गेटअगाडि एकजना प्रहरी नायव निरीक्षकको बर्दीमा समातेर तानेका थिए भने अन्य प्रहरीमाथि पनि जाइ लागेका थिए।
३२ वर्षीय गेभिन र ३३ वर्षीय एलई ओ लाई महानगरीय प्रहरी वृत्त दरबारमार्गको हिरासतमा राखिएको छ। अन्य दुईजनालाई सिंहदरबार बृत्तको हिरासतमा राखिएको महानगरीय प्रहरी परिसर टेकुले जनाएको छ। भिभोका कन्ट्री म्यानेजर गेभिन उनका साथीहरु राजधानीको लाजिम्पाटमा फ्ल्याटमा बस्दै आएको खुलेको छ।
महानगरीय प्रहरी वृत टेकुका अनुसार पक्राउ गरिएका ७० जना चिनियाँ नागरिकमध्येमा ४३ जनालाई छोडिएको छ। प्रहरी उपरीक्षक सोमेन्द्र सिंह राठौरका अनुसार ती चिनियाँले निषेधित क्षेत्रमा हु’लहुज’ज्तसँगै लकडाउनको पनि उलंघन गरेका थिए। उनीहरुले ड्युटीमा खटिएका प्रहरीमाथि हा’तपा’त पनि गरेका छन्। ‘पक्राउ परेका ती चार जनालाई अ’भद्र व्यवहारमा मुद्दा चलाइने भएको छ ।
‘आज शनिबार सार्वजनिक बिदा भयो, भोलिसम्म म्याद थपेर अनुसन्धान अघि बढाउँछौं। सिंहदरबार प्रहरी वृत्तका अनुसार दुई चिनियाँ नागरिकको नाम खुल्न सकेको छैन। सिंहदरबार अगाडि प्रर्दशन गर्ने क्रममा ४७ जना पक्राउ परेका थिए। ती नागरिक घर जान पाउनुपर्ने माग राख्दै प्रदर्शनमा उत्रिएका थिए। उनीहरु लकडाउनको उलंघन गर्दै ‘वी वान्ट टु गो ब्यााक होम’ प्ले कार्ड बोकेर निषेधित क्षेत्र तोडी सिंहदरबारतर्फ आएका थिए । थाहा खबर
२६ लाखलाई रोजगारी दिने योजना बनाएका छौं: मन्त्री पुन
कोरोना महामारी नियन्त्रण गर्न कडा प्रतिबन्ध थप गर्न डब्लूएचओले यसकारण दियो चेतावनी
चिसोमा कोरोना सङ्क्रमण थप बढ्न सक्ने ,अझ सतर्क हुन जरुरी